IOS 10 Hutano inotibvumidza kunyoresa sevanopa nhengo | IPhone nhau
Iyo iOS 10 Hutano Anwendung ichatibvumidza isu kunyoresa sevanopa nhengo
Steve Jobs, mumakore ake apfuura, anonzi akanyunyuta pamusoro penzira iyo zvese zvine chekuita nebasa rezvekurapa zvakashanda uye ndicho chimwe chezvikonzero nei Apple yakagadzira iyo Apple Watch uye iyo iOS Hutano application. Kubva ipapo, izvo zvigadzirwa zviviri zvave kuvandudza, kunyanya iyo Hutano app (Hutano) iyo ine yakawanda uye yakawanda sarudzo. Uye, maererano CNBC, muIOS 10 sarudzo nyowani ichawedzerwa iyo yatisina kuudzwa nezvayo paWWDC 2016.
Kana iOS 10 yasvika zviri pamutemo, chimwe chinhu chichaitika mukati memwedzi miviri, pachave nesarudzo nyowani inobvumidza (pakutanga) vashandisi muUnited States kunyoresa sevanopa nhengo, chimwe chinhu chavanokwanisa kuita kubva kune bhatani nyowani kuoneka mune Hutano application iyo yatove yakaiswa neyakagadzika (uye izvi hazvigone kubviswa semamwe mafomu akaisirwa default muIOS 10).
Tinogona kunyoresa sevanopa kubva kubhatani mune yehutano application
Tim Cook akati anotarisira sarudzo nyowani ita kuti zvinhu zvive nyore uye vazhinji vashandisi vasarudze kuva vanopa, dambudziko ravanoziva zvirinani Steve Jobs paakada kuisirwa chiropa muna2009 uye vakaona kuti kumirira kwacho kunogona "kusatsungirira" nekuda kwevapi venhengo vashoma munyika yeNorth America. Iyezvino Apple CEO akazvipira kupa chikamu chechiropa chake nekuti vese vakagovana rudzi rweropa, asi Mabasa akaramba kuki kupihwa kwaCook uye akazogashira chiropa chakazara.
Semazuva ese, chiitiko chitsva ichi chichawanikwa kuUnited States munaGunyana, asi hapana chakataurwa kubva kune dzimwe nyikaSezvauri kuona vese vashandisi vane iOS 10 yakaiswa pane yako iPhone, iyo sarudzo yatove kuoneka muSpain, saka kusahadzika kucharamba kuripo kusvikira kubva kuCupertino ivo vataura chimwe chinhu. Zvingangodaro zvichapararira kumatunhu mazhinji pamusoro pemwedzi (kana makore), asi ndinovimba izvi hazvitore chero Apple Pay uye mamwe masevhisi, nekuti mamwe masevhisi ari ekuwedzera, nepo hutano chiri chinhu chakanyanya kukosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Iyo iOS 10 Hutano Anwendung ichatibvumidza isu kunyoresa sevanopa nhengo
Monster Hunter Freedom Unite inodzokera kuApp Store uye tora mukana wekugadzirisa